Ungazi kanjani uma ukunikezwa kwamandla kungalungile | Iforamu yeselula
UDaniel Terrasa | 22/06/2022 12:00 | Internet
Akumele silinde isimo esibi kakhulu sokungakwazi ukuvula i-PC yethu. Kwesinye isikhathi kuba khona ezinye izimpawu ezisitshela ukuthi kukhona okungahambi kahle. Ungazi kanjani ukuthi ukunikezwa kwamandla konakele? Ingabe kuyadingeka ukuyishintsha ufake entsha? Sizohlaziya konke ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Empeleni ugesi kungenzeka ube nephutha noma uphuke futhi usasebenza ngokujwayelekile uma kuqhathaniswa. Okuxakayo ukuthi, lokhu kubi kakhulu kunalapho kuyeka ukusebenza ngokuphelele, njengoba kungabangela umonakalo ongabonakali kwezinye izingxenye zekhompyutha. Isimo sifaniswa nalezo zifo zomzimba womuntu ezinganikezi izimpawu nokuthi, lapho ekugcineni zizibonakalisa ngokusobala, kungase kube sekwephuzile kakade.
Asikhulumi nganoma yisiphi isiqeshana. Kufanele ukukhumbule lokho ugesi yiwo onikeza amandla kuzo zonke izingxenye ze-PC yethu. Isimo sawo kumele sihlale siphelele ukuze konke kusebenze futhi kungenzeki izinkinga.
I-Ver también: Ikhibhodi ye-laptop ayisebenzi. Indlela yokuyixazulula?
Sizobuyekeza kuqala izizathu ezingadala lokhu kungasebenzi nokuthi yiziphi izimpawu ezisixwayisa ngokuthi kungase kube nenkinga ngokuphakelwa kukagesi. Ekugcineni, sizobhekana nezixazululo ezifanele zecala ngalinye.
1 Izimbangela Ezivamile Zokuwohloka Kokuhlinzekwa Kwamandla
1.1 Isimo sezulu
1.2 Ukushisa okweqile
1.3 Ama-voltage spikes nokunye okudidayo kagesi
2 Izimpawu zezinkinga zokuhlinzekwa kukagesi
2.1 Umsindo wabalandeli owedlulele
2.2 Isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka
2.3 Ukucisha kungazelelwe ikhompuyutha
2.4 Iphunga elivuthayo
3 Amathiphu okwandisa impilo yokunikezwa kwamandla
Izimbangela Ezivamile Zokuwohloka Kokuhlinzekwa Kwamandla
Ukunikezwa kwamandla kuyisici esibucayi kakhulu, esivame ukuphuka. Lokhu kunengqondo, uma sicabanga ukuthi kungena amandla asakazwa kamuva kuyo yonke imishini. Nakuba ziningi futhi zihlukahlukene izimbangela ezivame kakhulu okubangela ukuwohloka kwamandla kagesi kanye nokungasebenzi kahle kwawo yilokhu:
Njenganoma iyiphi enye ingxenye yamakhompyutha ethu, i gqoka igcina ifinyeze impilo yokunikezwa kwamandla. Konke kuncike endleleni esisebenzisa ngayo amathuluzi ethu, isici sesikhathi kanye nekhwalithi yesiqephu. Ngokuvamile, abakhiqizi abakhulu banikeza isiqinisekiso seminyaka eyi-10. Ngemuva kwaleyo nkathi, maningi amathuba okuthi izoqala ukuhluleka.
Amazinga okushisa aphakeme ngokwedlulele ayisitha esikhulu sanoma iyiphi ingxenye kagesi, futhi nempahla kagesi iyafana. Kulokhu, kubalulekile ukuthi kube khona umoya ofanele ngaphakathi kwebhokisi. Isibonelo: uma i-fan ihluleka, ngesikhathi esifushane kakhulu ukushisa okuqoqiwe kuzobangela ukuthi umthombo uyeke ukusebenza ngokuphelele.
Ama-voltage spikes nokunye okudidayo kagesi
Ukwenyuka okungazelelwe kwamandla kagesi, noma isikhathi esifushane, kungalimaza kakhulu ukunikezwa kwamandla kwekhompyutha yethu. Eqinisweni, kungenye yezimbangela ezivame kakhulu zokwehluleka. Kuyiqiniso ukuthi bonke ngokuvamile banayo amasistimu okuvikela u-overvoltage, kodwa ngezinye izikhathi ayanele. Kungenzeka okufanayo nakithi uma kwenzeka ukuphazamiseka kukagesi nokunye okungahambi kahle kwalolu hlobo.
Izimpawu zezinkinga zokuhlinzekwa kukagesi
Ungazi kanjani ukuthi ukunikezwa kwamandla konakele? Kunezimpawu ezicacile, izimpawu ezibonisa ukuthi into ethile ayisebenzi ngendlela efanele.
Umsindo wabalandeli owedlulele
Akufanele ngaso sonke isikhathi kuhunyushwe ngokuthi a isignali ye-alamu. Kwesinye isikhathi umlandeli womthombo uvele ahlikihle kokuthile noma abe nothuli oluningi bese iqala ukuzwakala ngokwehlukile. Akuyilutho engathi sina.
Kodwa-ke, lapho ama-fan bearings esegugile kakhulu aqala ukwenza umsindo futhi, okubi nakakhulu, abafezi umsebenzi wabo wokungenisa umoya ngendlela efanele. Ngenxa yalokho, ukunikezwa kwamandla kubanda ngokuyingozi. Lo msindo uyabonakala futhi usinika umkhondo ocacile wenkinga. Ngenhlanhla, isixazululo silula: buyisela ifeni.
Isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka
Isikrini esihlaza okwesibhakabhaka seWindows esesabekayo singenzeka ngenxa yezizathu eziningi. Esinye sazo ukungasebenzi kahle kwamandla kagesi. Uma inganikezi ngokwanele amandla kuzo zonke izingxenye zekhompiyutha, zonke izinhlobo zamaphutha ziqala ukubikwa, ezinye zazo ezibucayi.
Ukucisha kungazelelwe ikhompuyutha
Uphawu olucacile lokuthi ugesi awusebenzi kahle. Iqembu lethu ivala noma iqala kabusha ngokwayo, ngaphandle koku-oda kwethu. Ikhipha ukwehluleka kweprosesa, isizathu esisobala kakhulu salokhu sisemthonjeni, obonisiwe ayikwazi ukugcina amandla aqhubekayo adingekayo ukuze okokusebenza kusebenze ngokujwayelekile. Uma lokhu kungenxa yokwanda kwamandla kagesi, ugesi cishe uzodinga ukushintshwa.
Kungenzeka ukuthi lapho lelo phunga elingathandeki lepulasitiki elivuthayo lifinyelela kithi, lizobe selivele likhona sekwephuzile. Ngokunokwenzeka, zonke izimpawu ezingenhla sezivele zinikezwe ngaphambili: umsindo wabalandeli, izikrini eziluhlaza okwesibhakabhaka nokuvalwa okungazelelwe kwekhompyutha.
Ingxenye enhle ukuthi asikho isikhala sokungabaza: ugesi ufile. Kwesinye isikhathi singabona ukuthi intuthu iphuma kanjani kuyo. Kunoma yikuphi, akukho okunye ongakwenza, ngaphandle esikhundleni saso ufake esisha.
Amathiphu okwandisa impilo yokunikezwa kwamandla
Nakuba kungekho okuhlala unomphela, ziningi izinto ezingenziwa ukuzama ukwelula impilo yokunikezwa kwamandla ekhompyutha. Kuyafaneleka ukunaka kancane lezi amathiphu amabili ayisisekelo (uyazi: siphephe kangcono kunokuzisola), njengoba zingasisindisa enkingeni enkulu:
Gcina umthombo uhlanzekile. Susa uthuli olunqwabelene ebhokisini kanye nakufeni usebenzisa ibhulashi elincane ukuze ufinyelele amakhona angafinyeleleki kakhulu.
Hlola izinga lokushisa lakho. Vimbela ilanga ekukhanyeni ngqo kukhompuyutha, qiniseka ukuthi isendlini epholile futhi enomoya. Futhi khumbula ukushiya isikhala phakathi kwe-outlet yomoya nodonga.
Okokugcina, uma ngabe usuphuzile kakade futhi ungenakho ukukhetha ngaphandle kokuthenga ugesi omusha, qiniseka ukuthi unawo amandla anele okwekhompyutha yakho. Bheka kahle amandla anconyiwe adingwa yi-CPU noma ikhadi lezithombe.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Internet » Ungasho kanjani ukuthi ukunikezwa kwamandla kubi
Ungakubona kanjani ukubuka kuqala kwezindaba ze-Instagram